Window တင်ပြီးတိုင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်မယ့် မြန်မာဖောင့်များ... by CHAN LAY (MCMM) - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home PC Fonts Window တင်ပြီးတိုင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်မယ့် မြန်မာဖောင့်များ... by CHAN LAY (MCMM)
Window တင်ပြီးတိုင်း မရှိမဖြစ်လိုအပ်မယ့် မြန်မာဖောင့်များ... by CHAN LAY (MCMM)
U Oo Cracker at 4:10:00 PM PC Fonts,
ကျွန်တော် ချမ်းမြေ့မောင် ယနေ့ ဝေမျှပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့...
ကျွန်ပျူတာကို Window အသစ်တင်ပြီးသည့် အခါတိုင်း Myanmar Font သွင်းဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့... အချိန်မျိုးမှာ...
ကျွန်တော်ယခုပေးမယ့် Font Collection လေးကို Download ရယူပြီး... အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ
လွယ်ကူလျှင်မြန်အောင် Installation progress ကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါနော်...။
ထို့အတွက်ကြောင့် မည်သူမဆို Download ရယူပြီး သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်ဗျာ...။
ယခု ဆောဖ့်ဝဲလ်းလေးအား အရင်ဆုံး Download ရယူပါ...။
File Size - 15.9 MB ( မများဘူးနော်...)
File Type - .rar
File format - .ttf
Uploaded by - CHAN MYAE MAUNG
File Password - www.chanmyaemaung.net
<=== :: DOWNLOAD :: ===>
Font Installation ပြုလုပ်ရန်နည်းလမ်း
၁။ ကျွန်တော် တင်ပေးထားတဲ့ Font File လေးကို Download ရယူပြီးရင် Deskop ပေါ်မှာပဲဖြစ့်ဖြစ် New folder တည်ဆောက်ပေးပြီး Extract လုပ်ပေးလိုက်ပါ...။
၂။ Extract လုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် Desktop ပေါ်ရှိ အဆိုပါ... Font ဖိုင်တွင်းသို့... ဝင်ရောက်လိုက်ပါ...။
၃။ Fonts တွေရဲ့နောက်ဆုံးက .PFB * ၊ .RFM * နှင့် .ttf * အစရှိသည့် Fonts အားလုံးကို ( Ctrl+A ) ကို တွဲနှိပ်ပြီး... Select လုပ်ကာ... ( Ctrl+C ) ကို နှိပ်ပြီး Copy လုပ်ထားပေးလိုက်ပါ။
၄။ ပြီးလျှင် Start Button ခေါ် ( Window Buttom + R ) ကိုတွဲနှိပ်ပြီး... Run box ကျလာလျှင် ထို Box အတွင်းတွင် fonts ဆိုသော စာသားကို အကြီးဖြစ်ဖြစ်၊ အသေးဖြစ်ဖြစ်ရိုက်သွင်းလိုက်ပြီး... Enter ခေါက်ပေးလိုက်ပါ။
၅။ ထို့နောက် Fonts ဆိုသည့် Pannel ထဲရောက်သွားပြီး... မိမိစက်ထဲမှာ ရှိတဲ့... System Fonts များစွာကို တွေ့ ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်...။
၆။ စောစောက... Copy လုပ်ထားသော.... Fonts များကို ထို pannel အတွင်းတွင် ( Ctrl+V ) ကိုတွဲနှိပ်ပြီး... Paste ချပေးလိုက်ပါ...။
၇။ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့... တစ်ချို့ဖောင့်တွေက သွင်းပြီးသား (သို့) ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့... နောက်တစ်ကြိမ်အစားထိုးသွင်းလိုပါသလား? လို့မေးလာပါလိမ့်မယ်...။ အဲ့ဒါဆိုရင်တော့... YES! ကိုသာနှိပ်ပေးလိုက်ပါ...ခင်ဗျာ...။
ကျွန်တော် ခုနကပြောထားတဲ့... .PFB *, .RFM * တို့ကို Copy Paste လုပ်တဲ့အခါ... Can't install ဆိုပြီး Warring တက်လာတတ်ပါတယ်...
မပူပါနဲ့... Close ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ရင်... အလိုအလျှောက် သွင်းပေးသွားပါလိမ့်မယ်နော်...။
( :: ပိုစ့်တင်သူ-ချမ်းမြေ့မောင် :: )